Qasabada jikada Iyadoo guga jiidaya buufin
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Jiid qasabadaha Jikada / WOWOW Kushiinka qasabada qasabada ganacsiga
[Dhisida naxaas adag】 Tuubada buuxinta dheriga culayska badan waxay ka samaysan tahay naxaas adag oo qaali ah oo miisaankeedu yahay 9.7 Ibs. Tubada saxanka jikada ee naxaasta leh oo leh dhamaystirka nikkel-cadaashka ayaa ah miridh, daxal, adkaysi u leh, waxayna hubisaa badbaadada biyaha iyo cimriga dheer.
[2 Hababka socodka biyahaMadaxa buufinta pre-luqluqadda waxay bixisaa buufin xoog badan oo cadaadis leh si ay meesha uga saarto hadhaaga cuntada, waxay ku sii furnaan kartaa kaliya hal riix oo gacanta ah oo aan loo baahnayn in la qabto. Habka qulqulka ee buuxinta dheriyo waaweyn iyo digsiyada daqiiqado gudahood. Waxay ku shaqayn karaan isku mar waxayna wareegaan 360° taasoo ka dhigaysa cunto karinta mid hufan.
[Naqshad SameyntaTubada dabaasha ee sare ee 360° waxay siinaysaa meel ku filan hawl kasta oo jikada ah - nadiifinta, buuxinta, iwm 90° naqshad hal gacan ah oo la isku hagaajin karo oo fudud in la xakameeyo heerkulka biyaha iyo qulqulka qulqulka isku mar.
[Way fududahay in la rakibo】 1 ama 3 dalool rakibaadda. Waxaan ku siineynaa tilmaamo faahfaahsan, qalabka rakibaadda iyo qalabka, oo ay ku jiraan saxanka daboolka daboolka, tuubada biyaha tucai 0.5m ee hubinta tayada, galoofyada iyo wixii la mid ah. Ku rakibida fudud adiga oo aan lahayn tuubiste.
[Adeegga macaamiishaWaxaa daboolay soo celinta bilaashka ah ee 90-maalmood iyo dammaanad 5-sano ah. Haddii aadan ku faraxsanayn wax su'aalo ah, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
Jiilaalka tubada tubada jikada 2312000
Tubooyinka jikada ee jiilaalka guga jiilaalka waxaa asal ahaan loo sameeyay isticmaalka warshadaha maqaayadaha oo keliya. Sida aad u soo bandhigi karto, waxqabadka iyo cimri dhererka maqaayadaha ayaa aad u baahan oo dhammaan qalabka jikada sida guga daadashada tubooyinka jikada waa inay fuliyaan ugu badnaan. Shaqaaluhu si dhakhso leh ayay u isticmaalayaan tubooyinka wershadaha wershadaha ku shaqeeya oo aan si macaan lahayn. Joojinta suurta galka ah ee tubada kushaqeysa musqulaha gu'ga waxay noqon kartaa musiibo. Sidaas awgeed, tubooyinka wershadaha ee wershadaha ayaa la sameeyay iyada oo la waafajinayo heerarka ugu sarreeya ee warshadaha, iyo xitaa qalab intaa ka sii dheer. WOWOW waxaan si caadi ah u isticmaalnaa heerar sare oo warshadaha ah, xitaa waxaan xitaa diiradda saarnay sii joogteynteena qulqulka biyaha tubada wershadaha ee yaabka leh.
Dad badan ayaa guryahooda ku rakibay tubada tubada tubada biyaha tubada. Iyada oo ku xidhan naqshadaada jikada, muuqaalka warshadeed ayaa laga yaabaa inay u shaqeyso jikadaada si aad u wanaagsan. Ugu yaraan waad ogtahay in cimri dhererkiisu yahay kushiinka kushiinka warshadaha uu yahay mid heer sare ah, waxqabadka ayaa ah mid heer sare ah naqshadeyntiina waxay siisaa ceyriin, taabasho warshadeed jikadaada. Maaddaama tubooyinka jikada sida caadiga ah ay yihiin meelaha ugu muhiimsan ee foornada lagu kariyo, iyadoo qulqulka tubadan ee jiilaalka qulqulaya ay hoos u soo jiideyso dhab ahaan waxaad ku qaadan doontaa dareenka jikadaada oo dhan. Sababtoo ah qaro weyn, jilicsan, iyo naqshadeyn yar, tubada jikada ayaa gaar ahaan ku habboon naqshadaha jikada casriga ah. Sidaa daraadeed, qulqulka tubada tubadan ee jiilaalka jiilaalka wuxuu xaqiiqdii noqon doonaa casriyeyn ballaaran oo loogu talagalay naqshadeynta jikada ee casriga ah.
Gu'ga warshadaha ayaa hoos u daadiya tuubada jikada
Jikada waa meesha aad ku karsatid gurigaaga. Qaar badan oo ka mid ah qaybta karinta ma aha caqabad, laakiin qaybta nadaafadda ayaa ah. Sidaad wax u karsatay oo aad wax u cuntay, nadiifinta jikada badiyaa maahan shaqo aad u mahadnaq badan. Xitaa haddii aad nadiifisay jikada ka hor isla maalintaas, cunno kasta ka dib waxaad u baahan doontaa inaad marwalba bilawdho. Miyaanay fiicnayn inaad ku raaxeysan laheyd sida ugu badan ee nadiifinta sida karinta kale? Hagaag, ma dammaanad qaadi karno in nadiifintu ay noqon doonto shaqada ugu xiisaha badan ee jirta, laakiin ugu yaraan waxaan ka dhigi karnaa mid aad u xiiso badan marka loo eego qubayska biyaha tubada jikada. Iskusoo wada duuboo, waxaan u fududayn karnaa wax badan oo sahlan oo lagu nadiifin karo tubada jikada wershadeena.
Qulqulka biyaha tubada ee WOWOW guga oo daadanaya wuxuu leeyahay qaab dhismeed badan leh. Madaxa buufinta cadaadiska sareeya ayaa si sahlan uga saara dhammaan wasakhda dheryaha iyo digsiyada. Ka sokow, tubadan weelka lagu karsado ee warshadaha ayaa leh laba nooc oo durdur ah. Qalabka jiidista jiidayaa wuxuu ku siinayaa buufis cadaadis sarreeya, iyo tubada jikada sare ee arc-ga ayaa leh durdur joogto ah. Iyada oo ay tuubbadeeda biyaha wareejin karto oo rogrogmi karto oo madax madax ku soo jiidi karto, tuubada ayaa la ballaarin karaa si ay u ballaadhiso gaadhitaankaaga si weyn. Gacanta birlabku magnetku wuxuu si adag u qabanayaa madaxa buufinta si uusan u wareegin.
Jiilaalka tubada kushiinka jiid jiidaha si loogu isticmaalo wershadaha
Ka sokow waxqabadkeeda, guga tubadan tubada tubada dareeraha ayaa loo sameeyay cimri dherer. Ugu horreyn, dhammaan agabku waa bilaa-madax-madax-bannaan oo daciifa. Ka sokow, waalka loo xakameeyo heerkulka biyaha wuxuu ka samaysan yahay bir weyn. Waxaad dareentaa faraqa isla markaaba markaad wax qabaneyso. Sidoo kale xarkaha buufinta ayaa loo sameeyay isticmaal ganacsi. Farqiga ayaa ah mid cajiib ah marka aad isbarbar dhigto tubada jikada ee caadiga ah ee guriga. Maadaama tubooyinka warshadaha jikada aysan u baahnayn howlo loo dhan yahay oo loogu tala galay 'ku dhuumashada' hawlahan, xilliga qaboojinta tubada qolka jikada hoos u soo jiido gacanta ayaa gacanta ku heysa. Sidaa darteed wax tanaasul ah aniga iguma aanan sameynin waxqabadka iyo cimri dhererka armaajadan jikada.
Tuubbada bulukeetiga buluuga ah ee jilicsan ee jajaba hoos u jiid
Dheeraadnimada iyo waxqabadka ka sokow, qaabka ayaa waliba ah muhiimada ugu weyn marka aad dooranayso tubbada weelka jikada. Waxaad ubaahantahay naqshad cayriin ah, laakiin weli tubbada jikada waa inay ahaataa mid isku qurxiyo isla waqti isku mid ah. Cuntadani hagidda tubada weelka ee wershadaha waxay ku siineysaa iskudhacyo iska soo horjeeda oo cajaa'ib leh oo ka kooban warshadaha cayriin iyo xarrago leh, naqshad qurxan. Dhul ballaadhan wuxuu siinayaa ardaaga jikadaaga muuqaal cajiib ah, welibana markaad si faahfaahsan u fiirsato tubada jikada, waxaad arki doontaa naqshad ifaya oo saldhigeedu yahay jikada jikada. Isku-darkaani wuxuu ka dhigayaa qaabkani mid sooc iyo mid gaar ah. Fudud, xarrago leh oo cajiib ah isla waqtigaas.
Dahaarka buluugga ah ee loo yaqaan 'nickel' burush of guga tubada dareeraha jikada wuxuu bixiyaa dhammeystir qurux badan oo jikadaadu u baahan tahay. Dhamaadkan ayaa isla markiiba siinaya qurux qurux badan jikada kasta, iyada oo aan loo eegin nooca tubada jikada ee aad dooratay. Ka sokow waxaad ka faa iidaysan doontaa faa iidada dhabta ah ee aadan arki doonin wax farta wasaqda wasaqda ah oo wasakh ah tuubada jikada. Aad bay u fududahay in la nadiifiyo si loogu keydiyo xaalad cusub oo markasta jirta.
Rakibida guga tubada tubada tubada daadashada
WOWOW jikada tubada tubada biyaha ee WOWOW waa mid fudud oo lagu rakibo. Ha dul dhigin wadada qaldan sababta oo ah baaxadda cajiibka ah ee tubada warshadaha jikada. Waxaad si fudud ugu rakibi kartaa tubada weelka jikada ee naftaada adigoon caawin ka helin xirfadle qaali ah. Jiilaalka tubada tubada tubada tubada ee jikada ayaa la socda wax walba oo aad ugu baahan tahay inaad ku rakibto tubadan weelka ku jira ee warshadaha, sida buur dusha sare ah, tuubbooyinka biyaha birta ah, iyo tilmaan cad oo ku rakibida. Xitaa galoofisyada wax ku oolka ah ayaa lagu soo daray si ay kuu siiyaan khibrad qaybsi fudud oo raaxo leh.
Soo Koobid, Quful-qabeedka tubada tubadan ee jiilaalka ayaa kuu soo bandhigaya qiimo aad u fiican oo lacag ah, sababtuna tahay tayada warshadeeda iyo weliba qiimaha macquulka ah. Way fududahay in la rakibo, oo waxay runtii noqon doontaa mid qiimo u leh naqshadda jikadaada casriga ah. Qashin-qaadka dareeraha tubadan ee jiilaalka waxaa la socda dammaanad 5-sano ah iyo 90-maalmood oo lacag celin dammaanad ah. Sidaad u aragto, hadda WOWOW waxaan ku kalsoonahay tubada qolka fadhiga jikada waxaanan hubnaa inaad ku farxi doonto qiimaha lacagta aad helayso. Aynu ku dhiirrigelinno!
Faa'iidooyinka guga qasabadda qasabadda ayaa hoos u soo buufinaya aaladdall:
Tubada warshadaha jikada oo tayo sare leh
· Meel ballaadhan oo ay ku jirto tuubada biyaha dib looga noqon karo
· Cimri dheeri xad dhaaf ah
· Faahfaahin quruxsan iyo qurux badan
· Gacanta gogol-dhigashada
SKU: 2312000 Categories: Qubeyska jikada, Jiid qasabadaha Jikada Tags: Nickel caday, Jikada jikada ee jikada, Hal Gacan Biran